SANJAY GURUNG: विसुराल को च्यालेन्ज भिटोलाई
विसुराल को च्यालेन्ज भिटोलाई
काठमाडौ, फाल्गुन २७ -
गोरो र अग्लो भीमकाय व्यक्ति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन द्वारबाट बिहीबार मुक्का देखाउँदै निस्कँदा सबैको ध्यान त्यता खिचियो । उनको स्वागतमा ठूलै जमात उपस्थित थियो । फूलमाला लगाएर स्वागत मात्र के गरिएको थियो, उनले स्वागत गर्नेमाथि मुक्का बजार्न सुरु गरे ।
दृश्यले सबैलाई अक्क न बक्क बनायो । विमानस्थलको भीड तितरबितर भयो । सबै डराउन थाले । विमानस्थलका सुरक्षाकर्मीहरू झडप हुन थाल्यो भन्दै दौडादौड गर्न लागे ।
केहीबेरपछि थाहा भयो, त्यो त रेस्लिङ भिडन्तका लागि गरेको 'च्यालेन्ज' रहेछ । मुक्का हान्ने डब्लूडब्लूईका अमेरिकी रेस्लर बिग भिटो थिए । उनले नेपाली रेस्लर भरत विसुराल -द हिमालयन टाइगर) को चुनौती कडा शैलीमा प्रतिवाद गरे ।
सुरुमा विसुरालले भिटोलाई माला लगाएर केही अगाडि ल्याए । दुवैबीच भिडन्त होला भन्ने शंका कसैलाई थिएन । भिटो पनि स्वागतबाट खुसी थिए । उनी पनि भिडन्त गर्ने मनस्थितिमा थिएनन् । दुवैले आपसमा 'पञ्च' मात्र देखाए । विसुरालले विमानस्थल मै 'च्यालेन्ज स्विकाछौर्ं ?' भनी सोध्दा भिटोले 'रिङमै भिडौंला' भने ।
तर उपस्थित सञ्चारकर्मीको मनले के मान्थ्यो ? एक पत्रकारले उकासे, 'यस्तो माहौल र मौका नि छाड्छन् ?' अब भने विसुराल जोसिए । र, एक्कासि भिटोलाई भने, 'च्यालेन्ज' ।
भिटो पनि के कम ? विसुरालको मुखबाट 'च्यालेन्ज' शब्द के निस्किएको थियो, जाइलागे र विसुराललाई मुक्का हानेर विमानस्थलमै पछारे । लगाएको माला चुँडाएर फ्याँके र लगातार विसुरालमाथि आक्रमण जारी राखे । विसुराललाई बचाउन आएकालाई समेत मुक्का हान्दै हुत्याइदिए । रिसमा देखिएका भिटोले कोट खोलेर हल्लाए । त्यसपछि खल्तीबाट खसेको पासपोर्ट र आफ्नो सामानको परवाह नगरी जितको उन्मादमा कराउँदै विमानस्थलको गाडी पार्किङ क्षेत्रतर्फ लागे । घटनापछि विसुरालले आफू स्वागतका लागि आएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रेस्लिङको शैलीलाई पछ्याउँदै 'च्यालेन्ज' मात्र गरेको बताए । उनले आफ्नो जवाफ 'रिङ' मा देखाउने वाचा गरे । अमेरिकी, जापानी, स्पेनी र नेपाली रेस्लरले राजधानीमा शनिबार प्रोरेस एक्सपो नेपाल २०१० मा भिडन्त गर्दै छन् । पोखरामा चैत ७ मा रेस्लिङ हुनेछ ।
posted by Sanjay Gurung at 12:19 AM
तनहु को जिप दुर्घटना
गितार प्रतिष्पर्धा नेपालमा
उप प्रधान मन्त्रि सुजाता
पास्कोईको नेताहरुलाई आग्रह
सेनाको गोली ले ३ को मृत्यु
गल्तिप्रति छमायाचना गर्दै गिरिजा
दुर्गम गाउमा बिजुली
► May 23 - May 30 (11)
Paise the Lord
THE SONG OF THE THIS WEEK
मेरा सबै मित्रहरुमा नयाँ बर्ष 2016 सालको उपलक्ष्यमा बितेका पूर्णहुन नसकेका , असफल कार्यहरुमा सफलता मिल्न सकोस् भन्ने हार्दिक शुभकामना सहित सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु । - संजयकोरीया
संजय कोरीया . Watermark theme. Theme images by nicodemos. Powered by Blogger.